Soomaalida Sweden oo weli dalbanaysa in Kakabaveh laga saaro xisbiga Bidixda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fa'id Ali Nur oo ka tirsan ururka Afrosvenskarnas riksförbund sawir: Warsame Elmi
Hoggamiye Sjöstedt oo kulanka kula hadalyey boqolal qof oo u badnaa soomaali sawir: Warsame Elmi
Dadweynahii ka soo qayb galay kulan
Dadweynahii ka soo qayb galay kulan sawir: Warsame Elmi
Soomaalida Sweden oo weli dalbanaysa in Kakabaveh laga saaro xisbiga Bidixda
Fa'id: Ma ahan qaladkii ugu horeyey ee ay naga gashay
La daabacay fredag 20 maj 2016 kl 13.01
Hoggaamiyaha Vänsterpartiet iyo soomaalida Sweden oo xalay iska wareystay xildhibaanad ka tirsan xisbiga Bidixda oo dacayad cunsuriyad ah ka baahisay bulshada soomaalida.
Hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet Jonas Sjötedt ayaa xalay ka qayb-galay kulan uu soo qaban-qaabiyey ururka jaaliyadda afrikanka ah ee reer Sweden. Sjöstedt ayaa kulanka lagu casumay si uu ugu jabaayo una qanciyo dad badan oo aad uga caroodey dacaayad cunsuriyad ah oo xildhibaanad ka tirsan xisbigan ka baahisay bulshad soomaaliyeed ee ku nool Sweden. Intuu kulnaka socday su’aalahii la weydiiyey Sjöstedt waxay badankooda ku sabsanaayeen in xisbiga iska cayrinayo xildhibaanadan cunsuiryadda baahisay iyo in kale.
”Waxaan halkan u nimad in aad nooga jawaabtid su’aalsha ah; xisbiga ma ka saaraysiin amineh Kakabaveh mise maya” sidas waxaa weydiiyey hoggaamiye Sjöstedt mid ka mid ah dadkii ka soo qayb-galay kulanka, iyadoo su’aalshan aheyd su’aal mar kasta lagu soo celcelinayey oo la weydiinayey hoggaamiye Sjöstedt.
Laakiin Jonas Sjöstedt hoggamiyaha bidixda waxuu mar kasta asaguna ku celcelinayey in xisbiga guddahiisa ay ka socoto process la xiriirra in xildhinaabad Kakabaveh laga saaro xisbiga iyo in kale, aysan aheyd wax uu asaga keligiis go’aan ka gaari karo balse tahay arrin u taala xubnaha xisbiga iyo weliba kulan weynaha soo socda ee xisbiga.
Wareysi gaaban oo aan la yeeshay Sjöstedt markii uu kulanka soo dhamaadayna waxuu ii sheegay in kulanka ahaa mid wanaagsan oo loo baahnaa oo fikrado laysku dhaafsaday, taas oo ka roon halkii aragtiyada laysku dhaafsan lahaa aaladaha bulshada iyo qoraalo dood ah. Laakiin Sjöstedt markaan weydiiyey in uu kalsooni ku qabo xildhibaanad Kakabaveh ee lagu eedeynayo in ay ku kacday cunsuriyad, jawaabtiisa waxay noqotay sida tan.
- Sababta aysan maanta Amineh Kakabaveh xisbiga ugu matalin si furan, waxay tahay in ay dib u kasbato kalsoonida, jawaabta su’aalshana waa sidaas, ayuu yeri Sjöstedt.
Arrinkan waxuu ku sabsanyahay, muddo hadda laga jooga dhowr todobaad ayey xildhibaanad Kakabaveh waxay aaladaha bulshada ku baahisay film dacaayad ah oo ay leeyahiin qolyo cunsuriin xagjiriin ah. Filmkan ayaa dadka soomaalida ka dhigayey dad tuugo ah oo Sweden u imaada Sweden keliya in ay ka faa’ideystaan balse waxba ku soo kordhin bulshada Sweden. Waqti yar ka dib way ka saartay filmkii Facebook laakiin waa goortii ay ogaatay in filmkan ay sameeyeen koox cusniriyiin ah.
Soomaali badan ayaa aad uga carootay in xildhibaan ka tirsan xisbiga bidixda oo ah xisbi isku sheegay in uu yahay mid cunsuriyad diid ah oo u halgamaha dadka dulman. Inkastoo Amineh Kakabaveh maalmo kadib falkan ka baxisay raali-gelin hadana laguma qancin raaligelinteeda, waayo ma ahan mid daacad ku timid balse waa mid lagu qasbay, sida uu leeyahay Faa’id Cali Nuur oo ka tirsan golaha fulinta ururka jaaliyadda afrikanka afrosvenskarnas riksförbund.
Faa’id Cali Nuur oo ururkiisa soo qaban-qaabiyey kulanka uu Jonas Sjötedt la yeeshay bulsho aad uga caraysan arrinka ay ku kacday xildhinaadan la eedeynayo ayaan ku qancinin jawaabahiisa hoggaamiyaha dadweynaha siiyey.
- waxaan aaminsanahay in ay wax weyn ka qaban karaan, haddii ay yahiin hogganka xisbiga. waxay ka qaban karaana waxay tahay si u qalanta qaladka ay sameysay in ay ula hadlo iyada iyo in ay qanciyaan dadkiiqaladka laga galay, ayuu yeru Faa'id Cali Nuur.
Dhanka kalena Sjöstedt ayaa falka ay ku kacday Kakabaveh ee ah in ay qaybiso oo baahiso filmkan waxuu u arkaa tillaabo cunsuriyad.
-Falka ah in ay qaybiso filman cunsuriyad ah ee ka deybeeyaan koox cunsuriyiin ah falkasi waxuu la miyad in aad baahineysid aragtida caalam ee cunsuriyiinta, mana ah wax ay tahay in qof Vänsterpartiet ka tirsan uu ku kaco, ayuu yeri Jonas Sjöstedt.
Jab intee ah ayey ku tahay xisbiga bidixda in ay sidaas sameyso?
- Waa arkayaa shaqsiyan tirada dad ee halkan ku sugan iyo meelo kaleba ee isweydiineysa ”ma aamini karaa in xisbiga Vänsterpartiet yahay xisbi cunsuriyad diid ah” taas oo aan xaqiiqdii nahney. Annigana aad ayey muhim iigu tahay in aan niraahno haa, waad aamini kartaa, weligeyn waan ahaaneynaa cunsuriyad diid, mana ahaan doono kuwo qaybaha bulshada iska horkeena sida xisbiyada kale sameeyaan, ayuu yeri Sjötedt.
Intii kulanka socday ayaa dadka qaarkood laga dheehan karay in aysan ku qancin jawaabahii hoggaamiyaha bidixdu goobta keenay. Dadkan intooda badan doonayeen in Sjöstedt goobta uga dhawaaqo in Amineh Kakabaveh xisbiga laga saarayo.
Dad taageersan Kakabaveh
Dhanka kale waxaa kulanka ku sugnaa tiryo yar oo dad ah oo taageersanaa xildhibaanada la eedeynayo. Dadka waxaa ka mid ahaa Maria Rashidi oo aheyd haweeney asal ahaan ka soo jeeda dalka Iraan.
Amineh raali-gelin ayey ka baxisay marar badan. Waxayna aheyd in ay intaas ku filnaato, sida ay ilatahay. Waxay aheyd in la eego asalkeeda, sannadyada abdan ee ay halganka ugu jirtay sinaanta, xaquuqul insaanka, waxay ka soo carartay diktatooriyad, waxay u halgantay xaquuqda dumarka. 30 sanno ayaan aqaanaa Amineh. Waxaana arrintan u arkaa qorshe la doonaya in xisbiga looga saaro. Waxaan qabaan in aysan habooneyn hoggaamiyaash in ay yimaadan kulankas Amineh la’aanteed, ayey tiri Mara Rashiidi.
Laakiin Faa’id Cali Nuur ayaa asan yeri in aysan aheyn markii ugu horeysay ee Amineh Kakabaveh ku kacday qaladaadka lagu heysto iyo taakoorka ay dadka soomaaliyeed u geysatay. Waxuuna ku taliyey in xisbiga Vänsterpartiet ka dhabeeyo sheegashadiisa ah in uu yahay xisbi cunsuriyad diid ah oo ay ku dhaqaaqan sidii ay haweeneydaan xisbiga uga saari lahaayeen.
Xisbiga Bidixda (V) oo iska dheereeyay faafinta xagjirnimo
Kakabaveh oo qatar ugu jirta in xisbiga laga saaro
Amineh Kakabaveh oo siyaasadda ka qaadatay wakhti
Xildhibaanad baarlamaanka Sweden katirsan oo baahisey film dacaayad ka dhan ah soomaalida